Izindawo zesikhathi: zithini, zibalwa kanjani futhi zenzelwe ini | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kususelwa kulwazi olukhishwe kufayela le- hlela imephu Singasebenzisa i-zero meridian noma i-Greenwich meridian ukuze sikwazi ukuhlukanisa iplanethi yomhlaba ibe izigaba ezingama-24 esazi njengezindawo zesikhathi. Izindawo zesikhathi yilezo zindlela zokucabanga lapho sihlukanisa umhlaba khona ukuze sakhe ukwahlukana kwesikhathi futhi kuyinsiza ewusizo ukwazi ukuhlela isikhathi emhlabeni wonke.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi izindawo zesikhathi zisebenza kanjani nokuthi zibaluleke kangakanani.
1 Yiziphi izikhathi zesikhathi
2 Babalwa kanjani
3 Izibonelo zezoni zesikhathi
Yiziphi izikhathi zesikhathi
Njengoba iplanethi yethu iqhubeka ngokushintshana uqobo lwayo akuyona isikhathi esifanayo endaweni eyodwa kwenye iplanethi. Ngenkathi kuseSpain kusemini, ezwenikazi laseMelika kusakhanya. Ngakho-ke, uma sifuna ukusungula uhlelo lwawo wonke umuntu, kufanele sikubheke lokhu kwehluka. Kungakho izindawo zesikhathi zenziwa.
Izindawo zesikhathi zizalwa ngokuhlukaniswa kweplanethi yethu zibe izingxenye ezingama-24 kusetshenziswa i-zero meridian njengesethenjwa. Imibhalo ye-Meridian ingatholakala ebalazweni lokuxhumanisa. Lokhu kuba isisetshenziswa esiwusizo sokuhlela isikhathi sakho. Isikhathi ngasinye sikala amadigri ayi-15. Lokhu kusho ukuthi ukuze kuhlukaniswe ama-degree angama-360 we-terrestrial sphere, izingxenye ezingama-24 kufanele zenziwe. Isigaba ngasinye sizokhombisa inani lamahora elithathayo ukuze umhlaba uzungeze i-eksisi yawo. Yile ndlela esitshela ngayo ukuthi kuthatha kanjani usuku ukujika.
Ama-degree angama-15 alinganiswa yisikhathi ngasinye kulokho okuhlukaniswe emhlabeni, ahambelana nehora elilodwa. Ngakho-ke, phakathi kwezingxenye ezingama-24 lapho umhlaba uhlukaniswe khona uhambelana namahora angama-24 ngosuku.
Ukuze kusungulwe ishejuli elingaguquguquki kuyo yonke iplanethi, izindawo zesikhathi kufanele zibalwe kahle. Izindawo zesikhathi zilawulwa yisilinganiso sesikhathi esaziwa njenge-UTC (Isikhathi Esihlanganisiwe Somhlaba Wonke). Lezi zixhumanisi zesikhathi somhlaba nazo zingatholakala esikhathini sesikhathi samazwe athomu. Lesi sikhathi yisilinganiso sezesayensi esizama ukukala isikhathi esidlula kumawashi e-athomu nasemaphoyinti ahlukene eplanethi abaliwe. Okwamanje, kuyimodeli enembile kunazo zonke yokubala isikhathi.
Izindawo zesikhathi emhlabeni ziyabalwa usebenzisa njengereferensi i-zero meridian eseLondon. Ukusuka kule zero meridian empumalanga ifaka ihora elilodwa kuzoni yesikhathi ngasinye. Ngokuphambene nalokho, kusukela ku-zero meridian kuya entshonalanga ihora elilodwa liyakhishwa. Isizathu sokuthi sengezwe noma sisuswe ngamahora sincike ekujikelezeni komhlaba. Futhi ukuthi iplanethi ijikeleza ohlangothini olusuka entshonalanga luye empumalanga. Ngalesi sizathu, ukubalwa kwehora kokuphotha okuhamba ngale ndlela kubizwa ukuphambuka okuhle, kuyilapho okokuphotha okubalwa kolunye uhlangothi, okungukuthi entshonalanga, kubizwa ukuphambuka okungalungile.
Izibonelo zezoni zesikhathi
Sizokhombisa ezinye izibonelo zezindawo zesikhathi ukwenza lula ukuqonda. Ungashesha ukubala isikhathi edolobheni elithile esifundeni ngokwazi isikhathi saso. Kuzofanela ukhumbule ukuthi ngabe le ndawo ayinalo ilungelo lokususa amahora noma uma kulungile ukufaka amahora. Lezi izibonelo:
Amanye amadolobha ahambisana ne-zero meridian anezindawo zesikhathi UTC ± 00:00 futhi ngokwesibonelo iMali, i-Ivory Coast, iGreenland, iMauritania, iGambia, nePortugal, phakathi kwabanye.
Amanye amadolobha anesikhathi saso se-UTC -05: 00 (amahora amahlanu emuva) yiMexico, iColombia, iCanada, iPeru nezinye izifunda zaseBrazil. Kulokhu, sibona ukuthi indawo yesikhathi ayibi futhi isho ukuthi amahora amahlanu kufanele asuswe esikhathini esiboniswe yi-zero meridian. Uma ezindaweni ezitholakala kwi-meridian kungu-10 ebusuku, kuzo zonke izifunda ezinalesi sikhathi sesikhathi kuzoba ngu-5 ntambama.
Sizobona ezinye izibonelo ezimbi kakhulu njenge-UTC -12: 00 (amahora ayishumi nambili ngaphansi): lapha sithola iBaker Island neHolland Island. Lapha siyabona ukuthi kuseziro meridian ngu-7 ntambama, kulezi ziqhingi kuzoba ngu-7 ekuseni.
Manje siya kolunye uhlangothi lapho kufanele sengeze khona amahora. Ngenkathi yesikhathi ye-UTC +06: 00 (amahora ayisithupha ngaphezulu) sithola iBangladesh, iRussia neBhutan, phakathi kwabanye. Lapha siyabona ukuthi bakhonza ama-meridian kepha 9 ekuseni, kula mazwe kuzoba ngu-3 ntambama.
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi zingaki izikhathi zesikhathi. Inhloso enkulu ukukwazi ukwenza isikhathi emhlabeni jikelele. Amahora asuselwa kuma-meridians ahlukene njengoba kunqunywe iziphathimandla zezwe ngalinye noma indawo ngayinye. Uhlobo ngalunye lwendawo yesikhathi lunemiphumela ethile empilweni yansuku zonke yezwe ngalinye.
Ngalokhu kudalwa kohlelo lwesikhathi sesikhathi, sithola ukulinganiswa kwesikhathi samahora angama-24 osuku alawulwa kusukela ku-zero meridian. Le ndlela iba lula futhi isebenziseke kangcono ukukwazi ukubala amahora endaweni ngayinye. Isinyathelo sokwakha isikhathi somhlaba kodwa esilawulwa yizoni zesikhathi futhi sikhonjelwe kuzero meridian besivela Unjiniyela waseScotland waseCanada uSandford Fleming. Ukwakhiwa kwale ndlela yokulinganisa isikhathi emhlabeni wonke kwenzeka ekupheleni kwekhulu le-XNUMX.
Njengoba kukhona lezi zinguquko zesikhathi kuye ngendawo yomhlaba lapho sikhona, kunesimo esaziwa ngeJet lag. Imayelana nokulungiswa okungalungile kumashejuli ahlukene nothando kwizigqi zesiyadiya zabantu ababili abahamba njalo. Isibonelo, kubagibeli bezindiza nabashayeli bezindiza le Jet lag ivame ukubathinta kancane ezimpilweni zabo zansuku zonke. Lokhu kungenxa yokuthi, lapho befika ezweni elikude nemvelaphi yabo, uhlelo alufani, futhi nemisebenzi ayenziwa kulo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nezindawo zesikhathi ezahlukahlukene.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Izindawo zesikhathi